Caafimaadka in la isku galmoodo - Hablaha Media Network
HMN:- Si carruur loo dhalo waa in la isu galmoodaa. Galmo waxaa loola jeedaa in gus la geliyo siil.
Waxayna qayb dabiici ah ka tahay noloshada galmada ee dad badan. Galmada noocan ahi waxay ka mid tahay waxyaalaha muddo kaddib yimaada.
Qaar badan baa sameeya noocyo kale oo galmo ah ka hor inta aysan samayn golmada noocan ah ee guska iyo siilka lays gelinayo.
Waxaa caadiyan dhacda in lays taataabto oo lays fareeyo – oo unugyada taranka la taataabto ama siilka la fareeyo – ka hor intaan caadi laysugu galmoon. Daawo filimka Qof da’ yar oo gudan si aad u aragtid sida uu u eg yahay unugga taranka ee dumarka